Rosia: Sambany Misy Fampiharana Vahiny Natao Fampitàn-kafatra Nampidiriny Ho Ao Anatin’ny Firaiketana Federaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2017 11:40 GMT
Sary: Pixabay, avy amin'i Kevin Rothrock
Sambany hatramin'izay, no nampidiran‘ny Roskomnadzor, ilay mpanivana federaly ao Rosia, fampiharana fampitàn-kafatra avy any ivelany ao amin'ny aterineto ho ao amin'ny ” firaketana ireo fandrindràna sy fandefasana vaovaony”, ny orinasa Soisa Threema.
Hatramin'ny 2014, nitàna lisitra iray misy ireo tolotra ety anaty aterineto ny governemanta rosiana izay “mandrindra ny fanapariahana ny vaovao”. Amin'izao fotoana izao, dia ny tranonkala toy ny Vkontakte sy ny Odnoklassniki ( tambajotra sosialy anankiroa be mpampiasa indrindra any Rosia), ny sehatra fizaràna sary 2ch.hk, ny mpanjifa mailaka Mail.ru ary ireo tolotra am-polony maro no ao anatin'io listra io.
Natsofoka io lisitra io taorian'ny nankatoavana ny lalàna federaly iray mitaky ny hitehirizan'ireo haba- tranonkala ireo ‘metadata’ ( “torohay momba ny fahatongavana, ny famindràna, fandefasana ary ny fikarakaràna ny rakitra am-bava, ny voasoratra, ny feo na ireo karazana hetsika hafa”)-n'ireo mpisera Rosiana rehetra ary manao izy hahamora ny fidiràn'ny manam-pahefana Rosiana aminy. Azon'ny haba-tranonkala ialàna ny fahasarotana ateraky ny fanisahana io torohay io amin'ny fanomezana alàlana ireo rosiana tompon'andraikitra hiditra malalaka, maharitra amin'ny korian-drakiny manontolo.
Tamin'ny taona lasa, nanao sonia lalàna vaovao mampihorinkoditra i Vladmir Putin, izay milaza ny zavatra tsy maintsy zarain'ireo “mpandrindra ny fandefasan-kafatra” amin'ny governemanta. Manomboka amin'ny 1 Jona 2018, na iza na iza haba-tranonkala voarakitra ao dia takiana hanome alàlana ireo tompon'andraikitra hiditra amin'ny angon-drakitra rehetran'ireo Rosiana mpisera, miaraka amin'ireo ifaneraserany. Fanampin'izany, ireo haba-tranonkala ireo dia takiana hitahiry io angon-drakitra io any amin'ny lohamilina any amin'ny Federasiona Rosiana.
Ny Alakamisy 9 Martsa, nampidirin'ny Roskomnadzor tao amin'ny firaketany ny Threema, fampiharana fampitàn-kafatra amin'ny aterineto marika manokana avy any Soisa. Nolazain'ilay mpitondra tenin'ny orinasa tamin'ny fanambaràna tao amin'ny RuNet Echo fa nifandray tamin'ny Threema ny Roskomnadzor ary namotopototra, nefa tsy hanivana ireo fitakiana sarobidy voafaritry ny lalàna Rosiana :
Nangataka taminay ny Roskomnadzor mba hanomezanay ny anarana/adiresy ary ny anaran'ny sehatry ny haba-tranonkala ho an'ny firaketany mba hitohizan'ny fanomezanay tolotra ho an'ireo Rosiana mpisera, izay vatsianay.
Tsy mahalala ny fepetra izahay, na iray aza, hitehirizana, hanangonana na hanomezana vaovao, ary tsy hanao izany mihitsy izahay. Miasa ambanin'ny lalàna Soisa izahay ary tsy afaka mihitsy na mahazo manome ny mombamomba ny mpiseranay amin'ny manam-pahefana vahiny.
Ny Threema no voalohany amin'ny fampitàn-kafatra vahiny amin'ny aterineto tonga ao anatin'ny lisitra, ary ny 2017 dia izy no haba-tranonkala voalohany nanampy ny tao amin'ny firaketana, araka ny voalazan'ny Rublacklist.net, haba-tranonkalam-baovao izay manara-maso ny fahalalahan'ny aterineto any Rosia. Amin'izao fotoana izao, haba-tranonkala sy tolotra 73 samihafa ao amin'ny aterineto no tondroin'ny Roskomnadzor ho toy ny “mpandrindra ny fanapariaham-baovao.
Tamin'ny Jona 2016, dia notaterin'ny Fontaka.ru, haba-tranonkalam-baovaon'ny St Petersburg, fa ny Threema no mahavantana ireo Rosiana mpiasam-panjakana ambony sy ireo mpandraharaha. Tsy mitaky anarana, eny fa na dia ny laharana finday na adiresy mailaka mba hiraketana ny kaonty aza ilay fampiharana izay heverina fa ” fampitàn-kafatra amin'ny aterineto azo antoka sy tian'izao tontolo izao”. Efa nataonà orinasa lehibe ivelany, ny CN Lab, fanamarinam-piarovana ilay orinasa tamin'ny 2015, fa tsy navoakan'io orinasa io ho hitan'ny rehetra ny ‘code’-ny feno.